Madaxweynaha Galmudug ‘Qoorqoor’ oo dib ugu soo noqday Dhuusamareeb +(SAWIRRO) – HalQaran.com
Dhuusamareeb (Halqaran.com) – Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug, Axmed Cabdi Kaariye (Qoorqoor) iyo wafdi uu hoggaaminayay oo maalmahaan booqashada ku joogay dalka Jabuuti ayaa Isniinta galabta ah dib ugu laabtay Magaalada Dhuusamareeb.
Qoorqoor iyo Wafdigiisa ayaa waxaa Garoonka Diyaaradaha ee Ugaas Nuur ku soo dhaweeyay Guddoomiyaha Baarlamaanka Galmudug, Maxamed Nuur Gacal, Wasiirro, Xildhibaanno, Hawlwadeenada Madaxtooyada iyo qaybaha bulshada.
War qoraal oo ka soo baxay Madaxtooyada Galmudug ayaa lagu sheegay inuu guuleystay ujeedadii uu wafdiga Madaxweynuhu u tagay Xarunta Jamhuuriyadda Jabuuti.
“Socdaalka Madaxweynuhu ku tagay dalka Jabuuti oo la xiriiray xoojinta iskaashiga labada dhinac iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha, gaar ahaan dhanka dekedaha ayaa ku soo idlaaday guul iyo is-afgarad.” Ayaa lagu yiri qoraalka.
Ugu dambeyn, wasiirada Arrimaha Gudaha iyo Amniga Galmudug ayaa qayb ka ahaa wafdigii Madaxweyne Qoorqoor ku wehlinayay safarkiisii ugu horeeyay, ee uu ku taggo dalkaasi Jabuuti.
Tags: Dhuusamareeb, dib ugu noqosho, Madaxweyne Qoorqoor, Safar Jabuuti